Wadada dhexmarta Suuqa Bakaraaha oo laami la saarayo (Sawirro) – Radio Muqdisho
Wadada isku xerta isgoysyada Howlwadaag iyo Baar Ubax ee lasarayo laami casri ah ayaa waxaa iska kaa shanaya maamulka gobalka baanadir iyo rugta ganacsiga Soomaaliyeed, kaasi oo qeyb ka ah mashruuca dhiso dalkaaga, waxaana howshaasi fulinaya shirkad qaabilsan dhismaha waddooyinka oo laga leeyahay dalka Turkiga.
Agaasimha guud ee Rugta ganacsiga Soomaaliyeed Cabdi Abshir Dhoore ayaa sheegay in waddada ay muhiimad gaar ah u leedahay ganacstada Suuqa.
Guddoomiyaha Degmada Howlwadaag Axmed Nuur Cabdi Siyaad ayaa sheegay in laamigan uu yahay mid casri ah oo dhameystiran, isla markaana bulshada la fahamsiiyo inay iyagu wax qabsan karaan, isagoo ugu baaqay in laga wada qeyb qaato mashruuca dhiso dalkaaga.
Talaabadani waxa ay muujineysaa in bulshada dhexdooda ay wax dhisan karaan, iyadoo aan la isku haleyn gacan shisheeye.
Dowladda oo sheegtay in qorshe lagu yareynayo gubashada suuqyada la hirgalin doono